Horohorontany miisa 11 namely ny atsimon’i Iran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Aogositra 2018 3:37 GMT
Ny Asabotsy vao maraina (tamin'ny 07 ora GMT teo), nisy horohorontany maridrefy 5,8 namely ny atsimon'i Iran, araka ny filazan'ny USGS. Noho ny halaliny 44 km, tsy nisy heverina ho faty, saingy nisy nilaza fa nisy ireo olona vitsy mety ho naratra. Tamin'io fotoana io, nisy ny adihevitra fa raha diso izany halaliny izany, ary nahatratra 10km ny halalin'ny horohorontany, dia ho 0 hatramin'ny 100 no heverina fa ho faty. Tsy misy afa-tsy tanàna 5 monja ao anatin'ny 15 km nisy ny ivon'ny horohorontany ary tsy misy tanàndehibe eny amin'ny manodidina. Ny harivan'io andro io, nanamafy ny halehiben'ny horohorontany tamin'ny alàlan'ny Reuters ny IRNA fa 6,0 amin'ny maridrefy Richter ny refiny ary nahatratra ny faritany atsimon'i Hormuzgan saingy tsy nisy tatitra momba ny maratra na ny fahasimbana. Nilaza ny IRNA fa nampihovitrovitra ny faritra akaikin'ny nosy helodrano ao Qeshm any amorontsiraka atsimon'i Iran ny horohorontany. Qeshm no nosy lehibe indrindra any amin'ny helodrano ary faritra ara-barotra malalaka misy mponina 120 000 eo ho eo.
Tamin'ny 2 ora tolakandro GMT, nanonona ny tatitra navoakan'ny fiadidiana teo an-toerana & Volatsinana Mena ny sampan-draharaha misahana ny fanampiana eny ifotony izay nanara-maso ny toe-draharaha ary nilaza fa tsy nisy ny maty tamin'izany fotoana izany fa trano sasany no rava ary hita fa tany andranomasina ny foiben'ny horohorontany. Ny hariva, taorian'ny fanambaran'ny sampandraharaha maromaro tafaraka, nanolotra ity tatitra manaraka ity ny mpanara-maso ny fanampiana:
Horohorontany miisa 11 no namely ny faritanin'i Hormozgan teo anelanelan'ny horohorontany voalohany androany maraina ka hatramin'ny 1 ora:52 folakandro GMT manana hozongozona 5,4 ka hatramin'ny 3,1 amin'ny maridrefy Richter. Tsy nitatitra momba ny isan'ny maty ny tompon'andraikitrim-panjakana sy ny IRCS saingy mety hisy ny fahafatesana vitsivitsy sy fahavoazana lehibe ao amin'ny faritra. Tsy misy ny fanamafisana ny mety ho haben'ny fahavoazana ao amin'ny faritra, saingy araka ny filazan'ny fampahalalam-baovao, tapaka ny fifandraisana amin'ny ampahany. Nitranga tao amin'ny distrikan'i Fin ao amin'ny faritanin'i Hormozgan akaikin'ny andilan-dranomasina Hormoz any amin'ny Hoalan'i Persia ny horohorontany. Soa ihany fa tao anatin'ny ranomasina no nisy ny foiben'ny horohorontany mahery vaika indrindra ka nampihena ny voka-dratsy. Satria mahafantatra momba ny loza ny ankamaroan'ny olona voakasik'izany, dia afaka nandray fepetra fiarovana ilaina izy ireo. Efa eo ampanatontosana ny fanampiana vonjy taitra ny IRCS eo an-toerana raha eo am-panombanana ny toe-draharaha kosa ny manampahefana eo an-toerana. Ny fitambaran'isan'ny mponina ao amin'ny distrikan'i Fin dia 39.000 ary ahitana tanàndehibe 3 sy tanàna kely 210.